Mkpọchi mkpọchi dị elu gị na SlideLock | Gam akporosis
Slidelock, ngwa nhichapụ ihe eji eme ihe maka ihe eji eme ihe
N'ime izu abụọ mbụ nke ọnwa Febụwarị, ewetara m akara ndị a ngwa abụọ maka mkpọchi ihuenyo nke nwere ike dochie nke na-abịa na ndabara na ekwentị gị ma ọ bụ na mbadamba. Ngwa abụọ a bụ Pi mkpuchi y Ihu mkpọchi ihuenyo, ezigbo ngwa abụọ na-enye ndị ọrụ nnukwu mma.
Ma ebe ọ bụ na enweghị mmadụ abụọ na-enweghị atọ, Slidelock na-egwu taa, ọzọ dị ukwuu mkpọchi ihuenyo ngwa na-anọchi maka àjà a nụchara anụcha aka ka ihe DesignEwezuga eziokwu ahụ na ọ na-eweta nkwado maka gam akporo 5.0 na mmelite ọhụụ, ọ na-abịa njikarịcha kachasị mma ka ọ ghara iji ndụ batrị nke ọnụ ya eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi. Ngwa na-adọrọ mmasị anyị ga-ahụ n'okpuru.
1 Mkpọchi mkpọchi pụrụ iche
2 Ezigbo dochie anya
Mkpọchi mkpọchi pụrụ iche
Ọ bụrụ na anyị nwere ọtụtụ ngwa dị iche iche dị na gam akporo, ngwa ọhụrụ ndị na-abata ghọrọ mkpọchi mkpọchi nke ọnụ gị dịkwa ọtụtụ. Anyị na-agaghị na-eme mkpesa banyere ya ma ọ bụ ịbụ otu n'ime edemede nke anyị na-ahụ ihe ngwa ọdịnala na-abata na-adịbeghị anya. Ihe na-ekwu na Microsoft n’onwe ya eweputala ụdị ngwa abụọ a n’ime ọnwa ole na ole, hotara na mbụ Picturesque na Next mkpọchi ihuenyo.
Ihe setịpụrụ SlideLock iche bụ nke ya dị ọcha ma dị mfe interface na na iji ojiji dị iche iche eme ihe anyị nwere ike ịnweta mkpọghe ma ọ bụ ọbụlagodi ịnweta igwefoto. Ihe ndị ọzọ nke ngwa a nwere bụ ọkwa zuru ezu, pịa ugboro abụọ iji mepee ma ọ bụ ọbụlagodi iji kagbuo, na-echefughi nche site na PIN ma ọ bụ ụkpụrụ.
Ezigbo dochie anya
Amaara m ihe na-eme anyị mgbe ụfọdụ anyị na-etinye aka na ụfọdụ ngwa ma ndị ọhụụ na-abata mgbe niile na ndozi ụfọdụ na-eme ka mmadụ chefuo ịhụnanya ahụ wee gaa na nke ọzọ. Ọ bụghị na ọ bụ ekwesịghị ntụkwasị obi, naanị ihe anyị na-achọkarị arụpụta kachasị na ngwa yana SlideLock na-emeri.
E wezụga kwuru na usoro nke atụmatụ kwa enwere ike ịkọwa ntọala maka ngwa ọ bụla, dị ka ihuenyo n'onwe ya na-agbanye mgbe ọ na-enweta ọkwa, ebe na ncheta oge, na nke ahụ metụrụ ihe eji emepụta ihe na-amasị anyị nke ukwuu. Ọ bụrụ na ị na-achọ ezigbo ngwa maka mkpọchi ihuenyo SlideLock, ọ nwere ike bụrụ nke zuru oke maka ọrụ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Slidelock, ngwa nhichapụ ihe eji eme ihe maka ihe eji eme ihe